WOWOW Qubayska Dahabka ah ee Dahaarka ah ee Qubayska ah
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Centerset Furaha qasabadu Musqusha / WOWOW Qubayska Dahabka ee Xarunta Dahabka ah ee 4 -inch
Ku rakibida Inch Saddex-Hole: Waxay la timaadaa biyo-mareen, khadadka biyaha kulul iyo qabow ee cUPC-shahaadeeyay iyo gacmo-gashiyo, baakad dhammaystiran, oo si sahlan loo rakibi karo.
Retro & qasabadda Basin -fudud: Dahab, diiran oo raaxo leh, kuu samee musqul sharaf leh oo xarrago leh. Dhameystirka burushku wuxuu kaa caawin karaa inaad iska caabiso daxalka iyo daxalka nolol maalmeedka.
Si fudud loo Isticmaali karo. Qasabadda musqusha oo leh laba gacmood ayaa kuu oggolaanaysa inaad si fudud u xakameyso heerkulka kulul iyo qabow
Tayo sare leh qiimaha: Lugta naxaasiga ah iyo dhismaha oo hubinaya cimri dherer iyo ku -tiirsanaan; Kaydka caagga ah ee dhoobada oo aan lahayn faleebo. Biyaha tuubada musqusha oo laga sameeyay aerator ABS ayaa kaa caawin kara inaad keydiso biyaha. (Aerator -kaan si toos ah ayaa gacmahaaga hoos loogu dhigi karaa si loo nadiifiyo)
SKU: 2321400G Categories: Centerset Furaha qasabadu Musqusha, Qubeyska Musqusha Tags: Dahab dahab ah, Gacanta Labaad